ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု WysLuxury လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု
Warning: Use of undefined constant CHERRY_PLUGIN_DOMAIN - assumed 'CHERRY_PLUGIN_DOMAIN' (this will throw an Error inafuture version of PHP) အတွက် /home/wysseoagency/public_html/wysluxury.com/wp-content/themes/theme48505/includes/custom-function.php on line 40
Warning: Use of undefined constant CHERRY_PLUGIN_URL - assumed 'CHERRY_PLUGIN_URL' (this will throw an Error inafuture version of PHP) အတွက် /home/wysseoagency/public_html/wysluxury.com/wp-content/themes/theme48505/includes/custom-function.php on line 58
[/span12] [/အတန်း] [နာရီ] [အတန်း] [span3]
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏နောက် destination သို့ get ကူညီပေးနိုင်ပါသည်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း 24 နာရီတစျနေ့,7ရက်တပတ်. သငျသညျအနီးပိုပြီးတည်နေရာအတွက် link ကို click နှိပ်ပြီး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံစင်းလုံးငှားငှားရမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒါမှမဟုတ်ယူအက်​​စ်အေမှတဆင့်အရေးပေါ်. ကျနော်တို့မကြာမီလာမယ့်နိုင်ငံတကာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုကူညီပါနိုင်.
တစ်ဂျက် chartering ၏ကုန်ကျစရိတ်ပျံ၏တစ်နာရီကိုဒေါ်လာပေးဖြစ်ပါတယ်. မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ကုန်ကျစရိတ်လေယာဉ်၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအကြားကွဲပြားခြားနားသည်.
[/span3] [/အတန်း] [sm_hr] [အတန်း] [span12]
ဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းဘလော့ Post က
[posts_grid အမျိုးအစား =”တိုင်” စစ်ကြောင်းများ =”6″ တန်းစီ =”1″ order_by =”နေ့စှဲ” အမိန့် =”DESC” thumb_width =”170″ thumb_height =”170″ meta =”အဘယ်သူမျှမ” link ကို =”ဟုတ်ကဲ့” LINK_TEXT =”ဆက်ဖတ်ရန်” custom_class =”list_1″] [/span12] [/အတန်း] [နာရီ] [နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်] [အတန်း] [span6]
ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု WysLuxury လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု.
သငျသညျအနီးအနားရှိ Mid-size ကို deadhead ရှေ့ပြေးဗလာခြေထောက်ကိုးကားအပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမိနစ်သင်၏နောက်ခရီးသွားဦးတည်ရာသည်ငါ့ကိုအနီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနင်္ဂနွေခရီးစဉ်လေယာဉ်လေကြောင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေကောင်းလေပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Service ကိုရှာဖွေနေကြသည်. က USA တွင်မဆိုတည်နေရာ မှစ. သို့မဟုတ်ရန်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုမှကြွလာသောအခါကျနော်တို့ဘာပဲတောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့သငျသညျကိုကူညီနိုငျ, အမရေိဖြစ်စေသေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရိတ်အမှုဆောင်အရာရှိညီလာခံအစည်းအဝေး, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူမိသားစုအားလပ်ရက်နှင့်အတူ VIP သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုချွတ်, ငါတို့သည်သင်တို့အလျင်အမြန်သင်၏နောက်ခရီးလမ်းဆုံးရောက်ဖို့ကူညီပေးနိုင်သည်?
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်သင်သည်ထွက်ကူညီရန်, ကျနော်တို့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ7ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်-အခမဲ့ Chartered အတွေ့အကြုံကိုပျော်မွေ့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအထုပ်လာပြီဆုံးသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေခံစားရကြောင်းအလွန်အရေးကြီးသောအချက်များ. ငါတို့သည်သင်တို့၏ဦးတည်ရာတစ်ခုခုကိုတာဘိုပရော့ရွေးချယ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကို, အလင်းအိမ်ဂျက်လေယာဉ်, အလတ်စားဂျက်လေယာဉ်, စူပါအလတ်စား, မိုးသည်းထန်စွာဂျက်လေယာဉ်မှာလူကြိုက်များပွင့်လင်းမြို့မြို့တို့မှလျှော့စျေးစျေးနှုန်းမှာငှားရမ်းငှားရမ်းအလုပ်အမှုဆောင်လေယာဉ်ပျံ 5,000 ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလေဆိပ်, 120+ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောရေတပ်အနေဖြင့်နိုင်ငံများ.
ကျနော်တို့ပုဂ္ဂလိကဂျက်စင်းလုံးငှားရန်သင့် All-access ကိုလမ်းညွှန်များမှာ. အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်ထူးခြားဆန်းပြားလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစား, သို့မဟုတ်သင်သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာ, ငါတို့သည်သင်တို့သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏အာကာသဖမ်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်. အောက်ကကွဲပြားခြားနားသောဇိမ်ခံရာအရပျတည်နေရာနှင့်လေဆိပ်များ၏စာရင်း Explore https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_the_United_States.
[/plus_list] [/span6] [/အတန်း]
Akron, OH Dallas မြို့, TX Louisville က, KY လက်ပံ, ME
သည် Albuquerque, မိုင် Denver, CO လဂ်ဘုခ်, TX Raleigh, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား
ကျောက်ချစခန်း, AK ဒက်ထရွိုက်, MI မန်ချက်စတာ, နယူးဟမ်းရှား Reno, NV
Arlington, TX des Moines, အိုဝါ ကိုလံဘီယာ, SC မြစ်ကမ်း, , CA
အတ္တလန်တာ, GA အယ်လ် Paso, TX နောဖမြို့, TN Providence, RI က
aurora, CO Fort Wayne, IN mesa, THE Sacramento, , CA
Austin, TX ဝိန်း Fort Worth, TX မိုင်ယာမီ, FL Sioux ရေတံခွန်, SD က
ဘာလင်တန်, VT Fresno, , CA Milwaukee, WI Salt Lake City,, OUT
ဆိုသူက Bakersfield, , CA ပန်းကုံး, TX Minneapolis, MN san Antonio တွင်, TX
Baltimore, MD Gilbert, THE Montgomery, AL san Diego မှ, , CA
ရုဂျြ, THE လင်းဒေးလ်, THE Nashville, TN ဆန်ဖရန်စစ္စကို, , CA
ဘာမင်ဂမ်, AL ဂရင်း, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား New Orleans, THE san Jose, , CA
ဘော်စတွန်, MA Henderson, NV နယူးယောက်, နယူးယော့ Santa Ana, , CA
Boise, ID ကို ဟိုနိုလူလူ, HI Newark, NJ Scottsdale, THE
Bridgeport, မှန် CT ဟူစတန်, TX မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, ဒေါ် ဆီယက်တဲလ်, WA
လင်း, MT Indianapolis, IN တဖက်, ND စိန့်ပီတာစဘတ်, FL
Chandler, THE Jacksonville, FL မြောက်ကိုရီးယား Las Vegas တွင်, NV Staten ကျွန်း, နယူးယော့
Charlotte, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား ဂျာစီစီးတီး, NJ Oakland, , CA ဖွစျတဲ့စတော့ချ, , CA
အဘိဓါန် Cheyenne, WY Kansas City, MO ကို ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီး, ရလား Tampa, FL
ချီကာဂို, IL Little ကရော့ခ်, နဲ့ Omaha-, NE Toledo, OH
Chula Vista က, , CA Las Vegas မှ, NV Orlando တွင်, FL Tucson, THE
စင်စင်နာတီ, OH Lexington, KY Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး Huntington, WV
ကလိဗ်လန်, OH လင်ကွန်း, NE Phoenix မြို့, THE ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ, VA သို့
ကော်လိုရာဒို Springs, CO Long Beach, , CA Pittsburgh, PA ဆိုပြီး ဝါရှင်တန်ဒီစီ, DC က
ကိုလံဘတ်စ်, OH Long Island တွင်, နယူးယော့ Plano, TX Wichita, KS
Corpus Christi, TX Los Angeles မြို့, , CA လက်ပံ, OR ဝီလ်မင်တန်, OF
မူပိုင်ခွင့်© 2018 https://www.wysluxury.com- ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏. အားလုံးနေရာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီပိုင်ဆိုင်လည်ပတ်နေကြတယ်. - အထွေထွေတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အလုပ်သမားများ '' လျော်ကြေးပေး. သင့်ရဲ့ဧရိယာ၌သင်တို့ဒေသခံ Professional ကကိုယ်စားပြုမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူထိခုနှစ်တွင် Get! ****WysLuxury.com တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်မဟုတ်ပါဘူး "လေကြောင်းရန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော" မည်သည့်လေယာဉ်ပျံကိုပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်လုပ်ကိုင်ရန်မပါဘူး.	ဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း လေယာဉ်.